मध्यरात होस् वा दिन, जुनसुकै बेला घरमै खानेकुरा ल्याइदिने 'लाटोकोसेरो' :: सविना कार्की :: Setopati
मध्यरात होस् वा दिन, जुनसुकै बेला घरमै खानेकुरा ल्याइदिने 'लाटोकोसेरो'
२० लाखमा सुरू लाटोकोसेरोको एक वर्षमै ३ करोडको कारोबार
राति ढिलो गरी घर पुग्नुभयो अनि खाना बनाउन अल्छी लाग्यो! घरमा खाना खाइवरि थान्को घरेपछि पाहुना आए! कि तपाईंलाई आज घरको भन्दा फरक स्वाद खान मन लागेको छ! राति साथीको समूहमा रमाइलो गर्दै जाँदा खानाका आइटम थप्नु पर्‍यो कि!
यस्तै वा अरू कुनै कारणले राति जुनसुकै बेला पनि खानेकुरा चाहियो भने 'लाटोकोसेरो' लाई भन्नु न! घरमै आइहाल्छ नि!
लाटोकोसेरो! हो, लाटोकोसेरो! कामअनुसारको नाम!
तपाईंलाई थाहा छ नि, लाटोकोसेरो दिनभरि निष्क्रिय र रातभरि सक्रिय हुन्छ। तपाईंका लागि घरमै खानेकुरा पुर्‍याइदिने लाटोकोसेरो चाहिँ चौबिसै घन्टा सक्रिय हुन्छ।
'लाटोकोसेरोले नामअनुसार चौबिसै घन्टा सेवा दिन्छ। प्राथमिकता चाहिँ रातको समय हो,' कम्पनीका अध्यक्ष प्रज्ज्वलकुमार दाहालले भने।
लाटोकोसेरोले दिने खाना धोबीघाट, ललितपुरमा रहेको 'अगेनो' रेस्टुरेन्ट को हो। प्रज्ज्वल अगेनोका सञ्चालकमध्ये एक हुन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विकास र अनुसन्धान विषयमा एमफिल गरेका प्रज्ज्वल अगेनो सुरू गर्नुअघि जागिरे थिए। जागिर छाडेर उनले अगेनो खोलेका हुन्।
अगेनोका खाना परिकार लाटोकोसेरोमार्फत् कसरी पुग्न थाल्यो त?
यो सिलसिला कोरोना लकडाउनका कारण सुरू भएको हो। कोरोना संक्रमणले देशमा पहिलो पटक लकडाउन भएपछि सबै क्षेत्रहरू बन्द भए, सुनसान भयो। व्यापार–व्यवसाय ठप्प भयो। यसको असर अगेनोमा पनि पर्‍यो। कोरोना कम हुने लक्षण नै आएन। अगेनो नखुल्ने भयो।
अगेनोका सञ्चालकहरू कुनै नयाँ उपाय सोच्न थाले।
'कोरोनाले थला परेको होटल तत्काल खुल्ने अवस्था भएन। अगेनोका ६० जना कामदार बेरोजगार भए,' प्रज्ज्वलले त्यो बेलाको अवस्था सुनाए।
यही समयमा धेरै व्यवसायीले डिजिटल माध्यम अपनाउन थाले। ग्राहकले खोजेको सामग्री घरमै पुर्‍याइदिने अर्थात् होम डेलिभरी सेवा फैलियो। अगेनोका सञ्चालक प्रज्ज्वल पनि डिजिटल माध्यमतिर लागे।
उनले लकडाउनले बन्द रहेको अगेनोमा खाना बनाउने र अनलाइन अर्डर लिएर होम डेलिभरी दिने सोचे। उनले सोचेजस्तो सेवा धेरैले सुरू गरिसकेका थिए। अलि फरक के गर्न सकिएला त भनेर सोच्दै जाँदा राति पनि खाना डेलिभरि दिने उपाय फुर्‍यो। यही उपायसँगै उनको दिमागमा 'लाटोकोसेरो' नाम पनि फुरेको हो।
प्रज्ज्वल र उनका सहकर्मीले यही नाममा सेवा सुरू गरे। यसरी करिब डेढ वर्षअघि 'लाटोकोसेरो फुड्स' सुरू भयो।
लाटोकोसेरोले ग्राहकको अर्डरअनुसार खानाका अनेक परिकारसहित बेकरी परिकार र पेय पदार्थ घरमै डेलिभरी गर्छ। अर्डर मोबाइल एप्सबाट गर्नु पर्छ, फोनबाटै गरे पनि हुन्छ। अनलाइनमा 'लाटोकोसेरो फुड्स डटकम' मा अर्डर गर्न सकिन्छ। ग्राहकले इ–सेवा, खल्ती, इ–बैंकिङबाट वा नगद नै दिएर भुक्तानी गर्न सक्छन्।
खानामा भेज, मसरुम, चिकेन, फिस, मटन, पोर्कका परिकार उपलब्ध हुन्छ। खाजा र खानाका सेटका साथै बिरयानी, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, सुप, केक, कुकिज इत्यादि पनि पाइन्छ।
कम्पनीमा प्रज्ज्वल, सन्तोष नेपाल, सन्तोष पोखरेल, उमेश थापा र तारा रायमाझीको संयुक्त लगानी छ।
'हामीले २० लाख रूपैयाँ लगानीमा यो सेवा सुरू गरेका हौं,' उनले भने।
सेवा सुरू गरेसँगै उनीहरूले अगेनोमा खाना बनाउन थाले। लकडाउनले बेरोजगार भएका कामदार फेरि सेवामा फर्किन पाए। सुरूमा खाना डेलिभरीका लागि दुई जना चालक अर्थात् राइडर राखे।
तर सेवा सुरू गर्दैमा अर्डर कसरी आउँथ्यो र! उनीहरूले आफन्त र साथीसंगीलाई अर्डर गर्न लगाए। यो उपायले काम गर्‍यो। खाना मन पर्‍यो। प्रचार बढ्दै गयो, अर्डर पनि बढ्न थाल्यो।
अहिले २२ जना चालकलाई डेलिभरी गर्न भ्याइनभ्याइ भएको प्रज्जवल बताउँछन्। खाना बनाउन दस जना सक्रिय छन्।
प्रज्ज्वलका अनुसार लाटोकोसेरोले सकेसम्म छिटो डेलिभरी दिने गरेको छ।
भन्छन्, 'ठाउँअनुसार बढीमा ४५ मिनेटमा पुर्‍याइसक्छौं। हाम्रा फूर्तिला राइडरले ग्राहकलाई तुरून्तै प्रतिक्रिया दिन्छन् र खाना डेलिभरी गर्छन्। अर्डरमा रातिकै बढी छ। बेलुका सात बजेदेखि बिहान पाँच बजेसम्म धेरै आउँछ। खाना र पेय पदार्थ दुवैको उत्तिकै माग हुन्छ।'
नियमित अर्डर गर्नेहरू नै लाटोकोसेरोका मुख्य ग्राहक हुन्। बिरयानी, मःम, पिज्जा, चाउमिन, चिकेन चिल्ली र बर्गर मगाउनेहरू धेरै छन्।
खानाको गुणस्तरमा कुनै कमीकमजोरी नहुने उनको दावी छ। अनि सकेसम्म तातै पुर्‍याउने प्रयास गर्ने पनि उनले बताए।
अगेनोको मुख्य कार्यालय ललितपुर, धोबीघाटकै हो। काठमाडौं उपत्यकाका अन्य छ ठाउँमा शाखा छन्। यी सबै ठाउँमा खाना पाक्छ र डेलिभरी हुन्छ। पूर्वमा भक्तपुरको चाँगुनारायण र काठमाडौंको गोकर्ण, साँखु अनि पश्चिममा काठमाडौंको नागढुंगा, दक्षिणकाली, कीर्तिपुरसम्म खाना डेलिभरी हुने उनी बताउँछन्।
प्रज्ज्वलका अनुसार हाल दैनिक सयभन्दा बढी अर्डर आउँछ। शुक्रबार र शनिबार चाप धेरै हुन्छ।
'लाटोकोसेरोले एक वर्षमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको छ,' प्रज्ज्वलले भने।
लाटोकोसेरोले काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि सेवा दिन थालेको छ। चितवनमा सेवा सुरू गरेको एक महिना हुनै लागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सन्तोष नेपालले बताए।
उनका अनुसार नारायणगढबाट करिब २० किलोमिटर वरपर पूर्वमा खैरहनी, पश्चिममा गैंडाकोट, उत्तरमा रामनगर, पश्चिममा मेघौलीसम्म डेलिभरी हुने गरेको छ। चितवनमा पनि अगेनोको आफ्नै भान्सा छ जहाँ आठ जनाले खाना बनाउँछन्, १७ जनाले डेलिभरी गर्छन्।
विदेशमा बस्ने नेपालीले घरपरिवार, आफन्त र प्रियजनका लागि उपहार दिन पनि खाना अर्डर गर्न सक्छन्। यस्तो अर्डर स्वदेशकै अन्य सहरहरूबाट पनि आउने गरेको सन्तोषले बताए। जन्मोत्सव, विवाह उत्सव वा यस्तै अन्य अवसरमा पनि रातिका लागि खानाको अर्डर आउँछ।
सन्तोषका अनुसार अगेनो र लाटोकोसेरो समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। लाटोकोसेरोले डेलिभरी दिने खाना अगेनोकै हुनुपर्छ। उनी भन्छन्, 'हामीलाई अगेनोकै किचन चाहिने हुनाले व्यवसाय विस्तार गर्न बढी समय लाग्छ।'
तीस वर्षमुनिका यी युवाहरूले खानाका पारखीलाई चौबिसै घन्टा सेवा दिएका छन्। आफूले राम्रो आर्जन गरेका छन्। धेरैलाई रोजगारी पनि दिएका छन्।
(लाटोकोसेरोको फेसबुक पेजका लागि यहाँ र वेबसाइटका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बरः ९८४७३७९८९०)
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २९, २०७८, ०६:३०:००